घिमिरे युवराज - नेपाल
घिमिरे युवराजका लेखहरु
पुस्तकले विचार र सपनालाई परिपक्व बनाउन ठूलो भूमिका खेल्छ । हामीले लामो समय सत्ताधारीको इतिहास पढ्यौँ । सत्तास्थापित नायकबारे अचेल विवेचना हुन थालेको छ । शक्तिशाली खलनायकका कथा पनि महफ्वका साथ पढिए । तर कलाकार मनले सधैँ आम मानिसको कथा खोजी रह्यो । पछिल्ला गैरआख्यान माङ्गेना, भुइयाँ र ७२ को विस्मय पढेर म निकै लाभान्वित भएँ ।
घिमिरे युवराज, जेष्ठ २८, २०७६
भोलि नभए कहिले ?
बर्माको सशस्त्र द्वन्द्वले उब्जाएको प्रश्न, के बन्दुकले साँच्चै परिवर्तन ल्याउँछ ?
घिमिरे युवराज, पुस ३, २०७५